Izindaba zemboni |
isethi yokudla kwakusihlwa
inkomishi & usaucer
Ngabe i-bone china tableware ilula kakhulu ukuyibamba?
IBrithani yasungula i-bone china tableware iminyaka engamakhulu ayisishiyagalombili. Ngemuva kwentuthuko eminingana yomhlaba, isibe ngesinye sezinhlobo zobumba ezihluke kakhulu emhlabeni. I-Bone china tableware ngokungangabazeki ilungele kakhulu ukuhlobisa itafula lomshado, ngoba amathambo aqinile futhi abushelelezi, afaniswe ...
Yikuphi okungcono, i-porcelain emhlophe noma i-porcelain entsha yethambo, ake ngingenise?
I-porcelain tableware yi-tableware ejwayelekile kakhulu etafuleni lezinsuku zonke. Ngokusho kwezinto zokusetshenziswa, i-porcelain tableware ihlukaniswe yaba i-porcelain tableware emhlophe, i-bone porcelain tableware, ne-shell porcelain tableware. Phakathi kwazo, i-bone china tableware ithandwa kakhulu. I-bone yethambo yayingumsuka ...
Uyini umehluko phakathi kwe-ceramics ne-bone china?
1. Ukugcinwa kwezitsha zobumba 1. Isiwasho sasendlini singasetshenziselwa ukuhlanza nsuku zonke. 2. Faka i-ammonia encane ngensipho noma usebenzise ingxube yenani elilinganayo le-linseed ne-turpentine kuqala, okuzoba nokuncipha okuqinile futhi kungenza amathayili acwebezele ngokwengeziwe. 3. Uma uchitha uketshezi oluqinile lokudaya ...
Bhalisela incwadi yethu yezindaba
ezinkundleni zokuxhumana zethu
Isitezi esingu-903,9th, Isakhiwo A4, iLiLang International jewelry jewelry park, BuLan Rd, Nanwan Street, LongGang, ShenZhen China
Ingabe i-tableware yethambo china ilula kakhulu ...
Yikuphi okungcono, i-porcelain emhlophe noma i-b entsha ...
Uyini umehluko phakathi kobumba i ...
© Copyright - 2020-2021: Wonke Amalungelo Agodliwe.